Kooxda Arsenal oo ku dhow inay saxiixa Philippe Coutinho ku garaacdo Manchester United iyo Chelsea – Gool FM
(London) 25 Maajo 2020. Sida wararku ay sheegayaa kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa qarka u saaran inay saxiixa xiddiga naadiga Barcelona ee Philippe Coutinho ku garaacdo Manchester United iyo Chelsea oo dhankooda ka doonayey.
Waxaa la sheegay in Gunners ay dadaal badan ku bixinayso sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahayd xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho, kaasoo hadda amaah ugu ciyaara naadiga Bayern Munich ee dalka Jarmalka inkasoo ay milkiyaddiisa leedahay Barcelona.
Labo sano ka hor ayey kooxda ka dhisan gobolka Catalonia waxa ay Philippe Coutinho kaga soo iibsaday Liverpool adduun dhan 142 milyan oo giniga istarliinka ah, balse waxa uu ka soo dhalaali waayey shaqadii looga baahnaa ee garoonka Camp Nou.
Suuqii xagaaga ayaana amaah ay la socoto qiyaar iibsiga ah waxaa lagu siiyey kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich, kuwaasoo iyagana dhankooda go’aan ku gaaray inaysan wada iibsan oo ay soo celiyaan marka uu dhammaado kal ciyaareedkan.
Xiddiga kubadda abuura ayaa la la xiriirnayay kooxaha ka dheela Premier League qaarkood oo ay horboodayaan Manchester United, Chelsea iyo sidoo kale Liverpool oo dhankooda la sheegay inuu hunguri uga jiro inay dib ugu soo celiyaan Anfield.
Yeelkeede, waxaa la sheegayaa in hadda tartanka loogu jiro Philippe Coutinho ay dardar cusub la soo gashay Arsenal oo la sheegayaba inay qarka u saaran tahay inay saxiixa xiddigan ku garaacdo kooxaha doonaya, iyadoo haatan la fariisanaysa wakiilka ciyaaryahankan.
Warsidaha Le10 Sport ayaa warinaya in tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta uu Coutinho u arko saxiixiisa riyada, isagoo ku qalqaaliyey madaxda naadiga Gunners inay ka shaqeeyaan sidii ay laacibkan u keeni lahaayeen garoonka Emirates.